IBungalow yezitena ezipholileyo kwiSithili seMbali saseGarfield
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguDaniel
Lala ngokuvakalayo ebhedini yoLwandle kunye nemiqamelo yeTempur-Pedic kwifreyimu ene-tufted, ngoncedo lwe-blackout Bali cellular shades. Mamela iVinyl kwaye usasaze iinkqubo nge-55 ”Smart TV kunye nenkqubo ye-Apple TV. Ngokuhlwa, yiya kwindawo yomlilo yangasemva.
Ifakwe nje kwiibhloko ezisuka eRoosevelt Row kwaye kufutshane nebala lemidlalo kunye neendawo zekonsathi, iSithili seMbali saseGarfield sibamba uluntu oludlamkileyo lwezobugcisa. Ngqina inkcubeko yomculo, ukutya, neziselo ezivela kumashishini asekuhlaleni, ngokukodwa kwiihambo zenyanga zobugcisa.
Umgama ukusuka ePhoenix Sky Harbor International Airport
imizuzu eyi-6 ngemoto xa indlela ingaxakekanga